out the box with tim dillinger: Xanuunka shimbir guud ahaan dhif
Xanuunka shimbir guud ahaan dhif sidaas ma jirto baahi loo qabo in welwelin. Miro Caadi ahaan, cayayaan u bislaaday weerar shimbir. Cayayaanka waa goosashada arrin waqtigeedii si loo yareeyo khatarta hore-u shimbir garaacidSenangPoker.com Agen Judi Poker Online Terpercaya Indonesia.
CUDURADA beeri MIRAHA masduulaaWaxaa lagu tilmaamay inay warshad miro dalagga halkii iska caabiya cudurka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu micnaheedu ma aha iman kara ma aha dhirta miraha masduulaagii aad si cudur, gaar ahaan haddii ay deegaanka ma aha shuruudaha koritaanka buugta soo habboon tahay. Guud ahaan, cudurka ahaa ayaa bilaabay inay weeraraan warshadda ay sabab u fayadhowrka field si fiican ma loo dayactiro. Haddii uu dhirta buka waa in la sameeyaa si aanay u faafin taabataa dhirta kale. Waa kuwan qaar ka mid ah cudurada yihiin badiyaaba ku dhaca gacanta ku dhirta miraha masduulaagii ahaa hab soo socda:
Liisaska Stem Disease waa qudhmiCudurka barar guud ahaan weeraraa salka asliga ah ee bilowga ah ee la beero. Astaamaha weerar lagu gartaa suuska ee saldhiga ah ee asliga ah, taasoo keenta biyood afkoda oo weliba derejo dinac. In ay saameeyeen jiro a timo cad laga ganaax kaas oo mycelium fangas ah. Cudurka sababa fangas weerar Sclerotium rolfsii SACC. (More si caadi ah u weeraraan dhirta marka cimiladu waa qoyan).Dadaalka si loo xakameeyo cudurka kaBUNDAPOKER.COM AGEN TEXAS POKER DAN DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYAllana stem on miro masduulaagii ahaa in la sameeyo kartaa adoo dejista ah dheecaan iyo qoyaan inta lagu guda jiro xilli-roobaadka. Moobeyl dhirta la isticmaalayo sunta cayayaanka dhirta ku salaysan, sida caleemaha of lemongrass, toon, timirta, iyo basasha cas. Cuntadan waxaa waxaa la kariyey, kadibna lagu buufiyaa on dhirta oo dhan. Dadaal kale waa inay isticmaalaan wakiilada noolaha, sida sp Trichoderma. ama sp Gliocldium.
Bakteeriyadu Disease waa qudhmiCudurkaan waxaa sabab u ah caabuq leh sp Pseudomonas. Astaamaha cudurka kallana bakteeriya ee dhirta lagu gartaa bololka ah ee salka asliga ah, waxaa jira a xab ah hurdi-cad oo weerarka, sidoo kale wuxuu eegayaa caajis ilaa dhirta sabtoo ah.Control of cudurka kallana bakteeriyo loo sameeyaa by loo qabanayo fayadhowrka si joogto ah field, dheecaan soo hagaagay si looga hortago waterlogging, qooxitiga dhirta cudurka qaba, oo la tuuro ee ciidda ku wareegsan dhibic sii kordhaysa ee aagga beerista. Isku day in aadan waxa gabaabsi miska ciidda. Godad Xeebeedka ku rusheeyeen dhibic lime in ciidda ee degaanka pH uu kordho. Moobeyl dhirta la isticmaalayo sunta cayayaanka dhirta ku salaysan, sida caleemaha of lemongrass, toon, timirta, iyo basasha cas. Cuntadan waxaa waxaa la kariyey, kadibna waalasho dhirta oo dhan. Dadaal kale waa inay isticmaalaan wakiilada noolaha, sida sp Trichoderma. iyo sp Gliocldium.
Fusarium cudurka miyaadCudurka ayaa waxaa u sabab ah oxysporium Fusarium fungus ka. Calaamadaha waxaa ka mid ah laamihii geedaha ka waanuu, waana engegeen, oo kallana brown. Guud ahaan, astaamaha cudurka la arkaa oo ku saabsan la mid ah sida cudurka kallana bakteeriyo.Control of cudurka Fusarium oxysporium on beerashada organic waxaa loo sameeyaa by performing fayadhowrka field joGudangPoker.com Situs Judi Poker Online Terbaik Terpercayaogtada ah, dheecaan soo hagaagay si looga hortago waterlogging, qooxitiga dhirta cudurka qaba, oo la tuuro ee ciidda ku wareegsan dhibic sii kordhaysa ee aagga beerista. Isku day in aadan waxa gabaabsi miska ciidda. Godad Xeebeedka ku rusheeyeen dhibic lime in ciidda ee degaanka pH uu kordho. Moobeyl dhirta la isticmaalayo sunta cayayaanka dhirta ku salaysan, sida caleemaha of lemongrass, toon, timirta, iyo basasha cas. Cuntadan waxaa waxaa la kariyey,
Posted by Juragan Channel at 2:38 AM